सहकारी दिवस किन मनाइछ ? :: Sahakari Akhabar
सहकारी दिवस किन मनाइछ ?
२०७७ चैत्र ९ गते , सोमवार Sahakari Akhabar
सहकारी अभियानले हरेक वर्षको चैत्र २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने गरेको छ । चितवनमा २०१३ साल स्थापना भएको बखान ऋण सहकारी समितिको सम्झना गर्दै यो दिवस मनाउने गरिएको हो । यो वर्ष सहकारी अभियानले ६४ औँ सहकारी दिवस मनाउँदै छ । हरेक वर्ष सहकारी दिवसको नारा तय हुन्छन् । र हरेक वर्ष फेरिन्छन् पनि । सहकारी दिवस किन मनाइन्छ, मनाउनु पर्छ की पर्दैन ? यसै विषयमा सहकारी अखबारले सरोकारवालाहरूको बिचार सङ्कलन गरेको छ । विराटनगर वाट चिना थापाले सङ्कलन गरेको बिचार ।
तामझामका साथ सहकारी दिवस मनाउनु मात्रले अभियानले सार्थकता पाउँदैन
माधव अधिकारी, सहकारी कर्मी, विराटनगर
सहकारी दिवस सहकारी अभियन्ता, सहकारी कर्मी सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको एउटा पर्व नै हो । हरेक वर्ष चैत्र २० गते विभिन्न फरक फरक नाराका साथ यो दिवस मनाउने प्रचलन छ । त्यसले गर्दा सहकारी दिवसले नयाँ ऊर्जा थप्ने गरेको अवस्था छ । नेपालको सन्दर्भमा सहकारीको इतिहास त्यति लामो नभए पनि यो अभियानमा लाग्ने हरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
सहकारी दिवसले सहकारी के हो भन्ने कुरा आम जनमानसमा थप जानकारी गराउने र राज्यका सम्बन्धित निकाय हुलाइ घचघच्याइने कार्य गरेको अवस्था छ । त्यस्तै गरिबी उन्मुलन गर्दै समाजमा बचत गर्ने बानीको विकास गराउने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कार्य सहकारी संस्थाको हो भन्ने कुराको जानकारी दिने गरिन्छ ।
तामझामका साथ सहकारी दिवस मनाउनु मात्रले सहकारी अभियानले सार्थकता पाउँछ भन्ने कुरा भनेमा म विश्वस्त भने छुइन । यसलाई एउटा पर्वको रूपमा मनाउनुका साथै सहकारी भित्र रहेका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको छ । संस्था खोल्नु जति सजिलो छ त्यसलाई सहज र सरल ढङ्गले सञ्चालनमा राखिरहनु र सदस्यको बचतलाई सुरक्षा दिनुचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सञ्चालनमा रहेका संस्था हुलाइ उचित सल्लाह, सुझाव र व्यवस्थापकीय तालिम दिई सहकारी हुलाइ थप सुदृढ, मजबुत बनाउँदै लान सकियो भने मात्र तामझामका साथ मनाइने सहकारी दिवसले सार्थकता पाउने निश्चित छ ।
सम्विधानमा सहकारीलाई दिएको स्थानलाई जिवन्त राख्न दिवस मनाउनु पर्छ
हरिप्रसाद सुवेदी, लालीगुराँस साकोस बेलबारी, मोरङ
तपाईको प्रश्नमा मेरो धारणा प्रस्ट छ । सहकारी दिवस मनाउनु पर्छ । यस कारण कि मुलुकमा सहकारीले खेलेको भूमिका, राज्यले सहकारी क्षेत्रबाट देसको आर्थिक पक्ष र सामाजिक पक्षमा गर्ने रूपान्तरण र राज्यको विधानमा सहकारीलाई दिएको स्थानलाई जिवन्त राख्न ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहकारीको स्थानलाई कायम गर्नका लागि सहकारी सदस्यहरूलाई सुसूचित गराउँदै सहकारी क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको एक सशक्त माध्यम हो भन्नका लागि अभियानबाट सहकारी दिवस मनाउनु पर्दछ ।
सहकारी दिवस सहकारीकर्मीहरुका लागि प्रेरणाको दिन हो
हिमा मैनाली, सचिव, जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ, मोरङ
सहकारी दिवस मनाउनुपर्छ । किन भने वि.स २०१३ साल चैत २० गतेबाट नेपालमा सहकारीको संस्थागत रूपमा सुरुवात भएको हो । त्यसैले चैत २० गते भनेको सहकारी संघ / संस्था र सहकारीकर्मीहरुका लागि एउटा प्रेरणाको दिन पनि हो र एउटा महान् चाड पनि हो । यो दिन सहकारीले गरेका वार्षिक गतिविधि र सकारात्मक क्रियाकलापको स्मरण गर्ने र प्रचार प्रसार गर्ने दिन पनि हो । त्यसैले सहकारी दिवसलाई भव्यरुपले मनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
सहकारी लोकतान्त्रिक समाज व्यवस्था निर्माण गर्ने साधन हो
लक्ष्मी सापकोटा, सहकारी कर्मी, विराटनगर मोरङ
सहकारी दिवस मनाउनुपर्छ । किनकि सहकारीको सिद्धान्त सबैलाई आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक एकताको मूल धारमा ल्याएर समाजवादी अर्थ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै गरिबी घटाउने तथा लोकतान्त्रिक समाज व्यवस्था निर्माण गर्ने साधन वा माध्यम हो ।
आम समुदायलाई जानकारी गराउनको लागि पनि दिवस मनाउनु पर्छ
वीरेन्द्र यादव,गोपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, विराटनगर मोरङ
सहकारी दिवस मनाउनुपर्छ । किनकि यो राष्ट्रिय दिवस पनि हो । जिल्लाभरि छरिएर रहेका सहकारीकर्मीहरु एकै ठाउँमा बसेर छलफल र सहकार्य गर्न, सदस्यहरूलाई सहकारीको उद्देश्य, आवश्यकताको बारेमा जानकारी दिन पनि यो दिवसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । सहकारीले सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा पुराएको योगदान र सहकारी विकास क्रमले ल्याएको परिवर्तनको बारेमा आम समुदायलाई जानकारी गराउनको लागि पनि दिवस मनाउनु आवश्यक छ ।
नीति नियमका कुरा दिवसका दिन थाहा पाइन्छ
मिना श्रेष्ठ, शेयर सदस्य, विराटनगर,
सहकारी दिवस मनाउनुपर्छ । धेरै कुरा हामीले दिवसका दिन थाहा पाउँछौँ । अघिपछि त पैसा उठाउन आउने मात्र हुन । खासै अरू कुरामा जानकारी पाइँदैन । नीति नियमका कुरा देखि सहकारी क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा दिवसका दिन थाहा हुन्छ ।
सहकारीको महत्त्व बुझाउन दिवस मनाउनु पर्छ
उमा थापा (पोखरेल), शेयर सदस्य, मोरङ शैक्षिक सहकारी संस्था, विराटनगर मोरङ
सहकारीको उद्देश्य के हो त्यसमा प्रस्ट पार्दै सहकारीले दिने पाइँदाका कुरा आम जनतालाई बुझाउन, देशको विकासमा सहकारीको योगदानबारे राज्यलाई जानकारी गराउनु पर्छ, सहकारीप्रति राज्यको नीति, सहकारीका समस्या पहिचान गर्न, भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउन, भएको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन कालागि पनि सहकारी दिवस मनाउनुपर्छ ।
अभियानलाई जोगाई राख्न पनि सहकारी दिवस मनाउनुपर्छ
श्याम थापा, शेयर सदस्य, विराटनगर
सहकारी दिवस मनाउनुपर्छ । दिवस मनाउने मात्र नभई दिवसमा सहकारीमार्फत भएका राम्रा कामको प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ । सहकारीमार्फत व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सहकारीको महत्वका बारेमा सर्वसाधारणहरुलाई जानकारी दिएर सहकारीको महत्त्वको बारेमा बुझाउन सक्नुपर्छ । यो भयो भने सहकारी दिवस मनाएको पनि सार्थक हुन्छ । सहकारी अभियानलाई जोगाई राख्न पनि सहकारी दिवस मनाउनुपर्छ ।
राज्यले लिएको नीतिगत समस्यालाई सच्याउन पनि सहकारी दिवस मनाउनु पर्छ
अर्जुन आचार्य, अध्यक्ष, मुक्ति कृषि सहकारी संस्था, कानेपोखरी मोरङ
सहकारी एउटा अभियान हो । सहकारीले समाजवादको निर्माण गर्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा रहेका साना किसान तथा मजदुरहरू बैङ्किङ क्षेत्रसम्म पुग्न सक्दैनन् । त्यसै गरी उनीहरूले ठुला ठुला उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न पनि सक्दैनन् ।
तर, सहकारीको माध्यमाबाट धेरै श्रमजीवी तथा किसानले थोरै थोरै पुँजी सङ्कलन गरेर उद्योग खोल्न वा व्यावसायिक गतिविधि गर्न सक्छन् ।
त्यसले गर्दा सहकारीको महत्त्वलाई अझै प्रवर्द्धन, प्रचार र श्रमजीवी किसानलाई एकताबद्ध बनाएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न पनि सहकारी दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउनु पर्छ ।
देशको विकासमा सहकारीको योगदानबारे राज्यलाई जानकारी गराउनुपर्छ, सहकारीप्रति राज्यले लिएको नीतिगत समस्यालाई सच्याउन पनि सहकारी दिवसको अभियानमार्फत झकझक्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
उपलब्धिमूलक तरिकाले सहकारी दिवस मनाउनु पर्छ
समीक्षा दाहाल, शेयर सदस्य, विराटनगर
सहकारीको उद्देश्यको बारेमा जानकारी दिई सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गति बारेमा छलफल गरी समाधानको उपायलाई समेत केलाई सहकारीको प्रभावको बारेमा जानकारी दिनका लागि पनि सहकारी दिवस मनाउनुपर्छ । तामझामका साथ नभई उपलब्धिमूलक तरिकाले सहकारी दिवस मनाउन सक्यो भने अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
२०७७ चैत्र ९ गते , सोमवार